Kungakapheli iminyaka eyishumi, i-lithium iron phosphate izothatha isikhundla se-lithium manganese cobalt oxide njengokhemikhali oyinhloko wokugcina amandla?
Isingeniso: Umbiko kaWood Mackenzie ubikezela ukuthi kungakapheli iminyaka eyishumi, i-lithium iron phosphate izothatha isikhundla se-lithium manganese cobalt oxide njenge-chemistry yokugcina yamandla ephambili. I-Tesla ...
Kungani ecabanga uLiFePO4 kuzoba yikhemikhali eliyinhloko lesikhathi esizayo?
Isingeniso: UCatherine von Berg, isikhulu esiphezulu seCalifornia Battery Company, uxoxe ngokuthi kungani ecabanga ukuthi i-lithium iron phosphate izoba yikhemikhali eliyinhloko ngokuzayo. Umhlaziyi waseMelika uWood Mackenzie ulinganise ngesonto eledlule ukuthi ngo-2030, i-lithium iron phos ...
Ibhethri yensimbi ye-lithium phosphate
Ingena ngoJulayi 2020, ibhethri le-CATL lithium iron phosphate waqala ukuletha iTesla; ngasikhathi sinye, i-BYD Han ibhalwe ohlwini, futhi ibhethri ifakwe i-lithium iron phosphate; ngisho ne-GOTION HIGH-TECH, inani elikhulu lokusekela iWuling Hongguang esanda kusetshenziswa yi-al ...
I-LIAO Enginely Power Mover LiFePO4 ibhethri-LAF12V30Ah iklonyelisiwe
Muva nje, sizwe izindaba ezijabulisayo ezivela eYurophu izinkulungwane zamakhilomitha kude. Emjahweni wokusebenza kwebhethri lokuhambisa umahamba nendlwana ophethwe yi-ANWB (Dutch Bicycle Master Association), iLIAO Enginely Power Mover LiFePO4 ibhethri-LAF12V30Ah eyenziwe yinkampani yethu ishaya yonke imincintiswano eyi-12 ...
Imizamo Ebumbene Inqoba Ubunzima Bomqedazwe
Ubhadane lwe-COVID-19 selulokhu lwaba sematheni emhlabeni jikelele. Njengezinkampani eziningi eChina, sibhekene nezinselelo ezinkulu ekusebenziseni imigqa yethu yokukhiqiza kanye nokuletha imikhiqizo yethu. Igxile ekuhwebeni kwamazwe omhlaba, i-LIAO Technology ikhuthaza ukubambisana kwebhizinisi ne-clie ...
Umcimbi wokuvula ukubambisana ngokubambisana kwamanyuvesi
Umcimbi wokusayinwa kokubambisana kwamanyuvesi nokufundisa phakathi kwesikhungo sezinto zokwakha nobunjiniyela, inyuvesi yaseZhejiang nenkampani yethu, ububanjelwe ukuvulwa okuhle enkampanini yethu. Kuyisinyathelo esihle ukuvula isahluko esisha ...